Iintlawulo ze-Old Slavonic (visceral) i-massage kwizitho zangaphakathi.
Ngokwesiko, kudlalwa ukuba ukuxilwa kwasetyenziswa njengonyango yamaGrike, amaRoma namayeza aseMpuma. Kodwa ookhokho bethu baphinde bachaphazela umzimba ngendlela efanayo. Ngoku i-massage yaseSlavonic endala iyasetyenziswa kakhulu, eyayisenziwa eRashiya ngemihla yakudala.
Ngenye indlela le ngqangi ibizwa ngokuba yi-visceral. Leli gama eliguqulelwe lithetha "ngaphakathi". Oku kubonisa injongo ephambili yenkqubo - impembelelo kwizitho zangaphakathi. Ngoku kusetshenziselwa kakhulu kwilizwe lethu, kodwa naseYurophu nakwi-United States. Ukusikwa kwe-massage kusiza ukuphucula ukujikelezwa kwegazi kunye nemisebenzi yezitho zangaphakathi.
Kuya kuba lunomdla ukwazi ukuba kutheni lolu hlobo lwefuthe kwizitho zangaphakathi ludume kakhulu. Sekude kuphawulwa oogqirha ukuba izifo ezininzi zibangelwa ziziingxaki zamalungu angaphakathi: ngenxa yokuhlaselwa, ukuphawula kunye nokutshintsha kwendawo.
Yintoni enokufezwa ngoncedo lwe-Slavonic Old massage?
Ukuphelisa ukunyuka kwamanzi kwizitho zangaphakathi kunye nokuphucula ukuhamba kwe-lymph
Ukubuyisela imeko kwaye ubuyele ezinye izitho kwindawo yayo eqhelekileyo
Ukulungelelanisa inkqubo yokwenza izinto eziqhelekileyo kwizitho zangaphakathi.
Le nkqubo ilandelayo:
I-masseur kumashishini athile e-angle kwi-organ efunwayo kwaye iyishintsha kwisikhokelo esifuna.
Kule nkqubo isetyenzisiwe ngezixhobo ezahlukeneyo: amathini, izimbiza, iinqweba kunye neenkomfa. Umzekelo, ukubeka inamba, sebenzisa ibhokhwe ekhethekileyo, efakwe kwisisu kwaye ubuyisela inamba kwindawo efunwayo.
I-pot nayo inokukunceda ukuphucula umjikelezo wegazi. Ngokuqhelekileyo isetyenziselwa ukuphucula nokuzinzisa umsebenzi wee-pelvic. Kwakhona, le ndlela isetyenziselwa ukususa i-toxins nokulawula umsebenzi wengqondo. Ukuya esikhathini esibi kunokupheliswa ngale ndlela.
Kubucetyiswa nini ukusebenzisa i-Old Slavonic massage?
Njengawo nawuphi na umthelela kumzimba, lolu hlobo lokusilalisa luneziphakamiso ezithile zokusetyenziswa kunye nokuchasene.
Nazi izifo kunye neengxaki ezinokunyangwa ngukusikwa kwe-visceral:
Naluphi na ukuphazamiseka emsebenzini wendlela yamathumbu: ukuphazamiseka, ukunqandwa, i-colitis, izilonda, izilonda
Izifo zesibindi, iintso, i-pancreas kunye nesisu
Unceda ukuphilisa izifo zokuphefumula
Ukuphumelela kwimizimba yobunzima
Iphelisa izigulane ezisuka kwi-migraine kunye neengxaki zentsholongwane engqondweni
Unceda ukulahla izifo zesikhumba kunye nee-hernias ezahlukeneyo
Kwaye abantu abanempilweni baya kuba luncedo ukutyelela ngokukhawuleza ingcali kwi-massage yase-Old Slavonic. Oku kuya kunceda ukugcina ulutsha olude, kusebenze imetabolism kwaye lawula ukujikeleza kwegazi
Akukhuthazwa ukuba uvakashele i-masseur kubantu abanesifo somhlaza, isi-syphilis, thrombosis okanye i-gangrene. Ukunciphisa ukungena kunye nabantu abanomkhuhlane, abo abanesifo sofuba, ukugula ngengqondo okanye ukungasebenzi emisebenzini yezinye izitho zangaphakathi (ngokukodwa, ngegazi langaphakathi).
Musa ukumangaliswa xa, kwindlela yokuqala, isisu seqala ukugungqa ngenkuthalo. Oku kuthetha ukuba i-bile ducts yakhululwa kwaye yaqala ukusebenza ngokusebenzayo. Ngokuqhelekileyo, emva kweenkqubo ezininzi, izigulane ziqala ukuziva zibhetele kangangoko ngokwemeko yenyama, kodwa ngokuziphatha. Olunye ulwazi malunga nobuchule lunokufumaneka kwividiyo.
Indlela yokukhetha i-solarium
Iinkalo eziphambili ze-massage yaseChina
Ukukhishwa kweenwele zeLazara ekhaya: i-pros and cons of the procedure
Inkqubo yeKrismesi: njani ukubhiyozela iholide yokuqala
Iibhanti zokunyaniseka. Imbali kunye nenjongo yanamhlanje
Isaladi evela eYerusalem i-artichoke
Yintoni ongayenza ukuba ungakhathazeki ngomfana
Musa ukukhathazeka ngenxa yezizathu
Ukuphuhlisa intetho yomntwana: imithetho emihlanu yabazali
Ukukhulisa umntwana omnye kwintsapho
Izinwele zebhantshi ngobude obude obude
I-carrot ebosiweyo eneparsnip kunye ne-anyanisi
I-rooster enezandla zakhe ukusuka kwi-cotton pads kunye nephepha, njengophawu loNyaka omtsha 2017. Iigqoko zokugqoka, izandla kunye neentshukumo zonyaka omtsha zesikolo kunye nesifundo somntwana: iiklasi zeklasi kunye nesithombe